Ampiasana “elastique” ity fampihetseham-batana voalohany ity no tena mandaitra tsara. Ao ambany lohalika ilay “élastique” no apetraka. Mitazona “haltère” na tavohangin-drano kely iray isaky ny tanana. Aforitra ny lohalika toy ny manao “flexion” dia ampifandimbiasina akipily mankany aoriana ny tongotra haviana sy ny tongotra havanana. Mitsambikina hatrany mandritra izany. Averina in-20 izay fihetsika izay dia manao andiany 3 amin’izany.
Mila ankalana na zavatra avoavo eto. Atao eo anoloana izany. Atao eo ambonin’ilay ankalana ny tongotra havia dia takarina amin’ny tanana havanana izany. Sady mitsambikina no ampifamadihana ny tongotra sy ny tanana .Averina in-droa izany. Manao andiany telo hatrany.
Sady aforitra ny lohalika no mitsambikina dia alefa mifandimby manoloana ny tongotra havia sy havanana. Alefa somary lavidavitra ilay tongotra alefa manoloana. Atao mahavita in-30, ka ny tongotra havia sy havanana nitsambikina manoloana no isa 1.
Rehefa mihazatra dia ampitomboy ny isan’ny famerenana atao amin’izay hahita vokatra haingana kokoa.
Mahatsemboka be ireto fampihetseham-batana ireto ka ilaina ny misotro rano betsaka hamerenana ny rano verin’ny vatana.
Isaorana ny coach Josy ao amin’ny Art Sport Fitness Andrefan’Ambohijanahary nanolotra ny fampihetseham-batana anio. Fifandraisana : 0340399035